जनकपुरधाम, मसिंर ९ : महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकामा ६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गरेको आरोपमा पक्राउ परेका अरुण कुमार साह यसअघि पनि हत्या आरोपमा पक्राउ परेर धरौटीमा छुटेको रहस्य खुलेको छ । महोत्तरीको इलाका प्रहरी कार्यालय गौशालाका प्रहरी निरीक्षक प्रकाश रेग्मीका अनुसार उनी यसअघि पनि हत्या आरोपमा पक्राउ परेको तर अदालतको आदेशबाट धरौटीमा रिहा भएका थिए ।
रक्सीका अम्मली आरोपित साह रक्सीको झोँकमा आफनै साथी दिलिप ठाकुरको हत्या आरोपमा जेल परेका थिए । लकडाउनको बेला २०७७ वैशाख २८ गते आफनै गाउँले साथी ठाकुरको हत्या गरेको आरोप अरुण माथि छ । ‘दिलीप र अरुण दुवै जना रक्सीको अम्मली थिए, सँगै रक्सी खाएर आउने बेला दुवै जनाबीच झगडा भएर ढुंगाले एकअर्कामाथि हानाहान भएको थियो,’ प्रहरी निरीक्षक रेग्मील भने, ‘चोट त अरुणलाई पनि लागेको थियो तर अरुणले हानेको ढुंगाले दिलीपको मृत्यु नै भएको थियो ।’
त्यतिबेला पनि हत्या आरोपमा साहलाई पक्राउ गरेर कर्तव्य ज्यान मुद्दा नै चलाइएको उनले बताए । ‘तर थुनछेक आदेशको क्रममा महोत्तरी जिल्ला अदालतले उनलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएका कारण उनी रिहा भएका थिए,’ रेग्मीले भने, ‘अदालतको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरधाममा पुनरावेदन समेत गरिएको छ तर आदेश भने आइसकेको छैन ।’
‘उसले बालिकाको हत्या गरेर फालेको कुरा आफ्नो घरपरिवारमा समेत बताएका रहेछन्,’ प्रहरी निरीक्षक रेग्मीले भने, ‘उसको पारिवारिक स्रोतबाट नै हत्याको कुरा प्रहरीमा जानकारी आएको तथा परिवारका सदस्यले नै उसलाई प्रहरी कार्यालय गौशालामा ल्याएर सोमवार राति १२ बजे बुझाएका थिए ।’ राति नै अरुणलाई बर्दिबास लगेर बालिकाको शव फालेको स्थानमा लगेर प्रहरीले शव बरामद गरेको बुझिएको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासका प्रहरी नायव उपरीक्षक राजन चापागाईंका अनुसार पक्राउ परेका अरुणले आरोप स्वीकार गरिसकेका छन् । बालिका हत्याको विरोध गर्दै स्थानीयले बर्दिबासस्थित राजमार्गमा टायर जलाएर विरोध प्रदर्शन गर्नुका साथै आरोपी अरुणको बर्दिबास स्थित घरमा आगो समेत लगाए पछि तनाव उत्पन्न भएको थियो । प्रहरीले भीडलाई नियन्त्रणमा लिन १ दर्जनभन्दा बढी अश्रुग्यास तथा सोहि मात्रामा राउन्ड हवाई फायर समेत गरेका थियो ।
शव पोष्टमार्टमका लागि जनकपुरधाम
महोत्तरीको बर्दिबासमा हत्या भएकी बालिकाको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि जनकपुरधाम ल्याइएको छ । बलात्कारपछि हत्या भएकी ६ वर्षीया बालिका गुलाब साह खातुनको शव पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम ल्याइएको हो ।
मंगलबार दिउँसो स्थानीयले शव भेटेको ठाउँबाट उठाएर बर्दिबासस्थित पूर्वपश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेर दिनभर प्रदर्शन गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा प्रहार गरेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो भने पछि आफन्तको सहमति बिनै बालिकाको शव उठाएर पोस्टमार्टमका लागि जनकपुरधाम लगिएको आरोप लगाइएको छ ।
प्रहरीले गोली चलाएपछि भीड तितरवितर भएको थियो भने ३ जना घाइते भएका छन् । घाइते मध्ये गोली लागेका २ जनालाई थप उपचारका काठमाडौँ पठाइएको छ । संजय भनिने बर्दिवास वडा नं. १ को बुद्धिराज न्यौपानेको दाया तिघ्रामा र चारवटा गोली लागेको वडा नं. ५ का श्याम कार्कीलाई काठमाण्डौ पठाइएको छ । पिडितका आफन्त अफताब आलम टाउको फुटेको र उनको स्थानिय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । समान्य घाइते पनि एक दर्जन छन् । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको महोत्तरीका प्रहरी उपरिक्षक टीका बहादुर केसीले जानकारी दिए ।
Tags: हत्या आरोपितको अर्को अपराध